CHII CHINONZI INTERCHANGEABLE LENSES? - ULLER
CHII CHINONZI INTERCHANGEABLE LENSES?
Nguva zhinji, patinofunga nezve ski masks, mubvunzo unouya mupfungwa: is a aesthetic mubvunzo kana kuti ndizvo chaizvo zvakakosha pahutano hwangu? Zvakanaka zvechokwadi, sezvaungatarisira, mhinduro ndeyechipiri.
NDEZVIPI ZVINOCHINJIKA MALENZI UYE NEI ZVICHIKOSHA KUSHANDISA QUALITY MASK?
Paunenge uchisvetuka-svetuka zvakakosha kupfeka, ingave magirazi kana masiki, nekuda kwezvikonzero zvehutano. Zvino, ndezvipi zvakasiyana? Kune rimwe divi, masiki anovhara nzvimbo yakakura yechiso chako, saka iwe uchave nekudzivirirwa kwakanyanya kubva kuchando, radiation uye zvinhu zvinogoneka (sechando kana zvipembenene) zvinoedza kukanganisa iwe uchinakidzwa neskis. Mukuwedzera, izvi zvakagadzirirwa zvakakwana kuti zvienderane neheti uye, kunyanya, kune mienzaniso inokubvumira kuti upfeke magirazi ako (kana iwe usingadi kupfeka lenses) pasi pawo. Kusiyana nezvaungafunga, zvinhu zvavo zvinofarira kufefetera zviri nani, zvinopikisa zvakanyanya kudonha kunobvira uye, zvakanyanya kukosha, vane akasiyana-siyana akasiyana-siyana emhando yechiedza chega chega. Tichazotaura pamusoro peizvi gare gare, asi isu tichakuudza pachine nguva kuti kwete, hazvifanirwe kutenga masikisi akasiyana kune imwe neimwe mutsauko mukuvhenekesa: tekinoroji yakakwira zvakanyanya kufambisa basa.
Kune rumwe rutivi, magirazi haana kugadzirirwa zvachose skiing, kunyange zvazvo ari mamwe emitambo iyo inokurudzirwa zvakakwana (yakadai semagirazi emitambo yevamhanyi, motocross kana bhasikoro). Ichi ndicho chikonzero, kana wakapfeka ngowani, pamusoro pekusagadzikana uye nekukumanikidza kuti vapedze kudzidza, ivo havana kubata kwakaringana sekutakurira ngowani semasiki, vachikwanisa kudonha paunenge uchisvetuka nekutendeuka. . Mukuwedzera, hongu, zvinongovhara maziso ako, zvichisiya zvakawanda zvechiso chako pachena. Kune rumwe rutivi, zvisinganzwisisiki, vanopa kupisa kwakawanda. Uye iwe uchafunga: "chaizvoizvo?" Ehe! Vanotarisa kupisa uye vanokuita kuti uwedzere kudikitira, izvo zvinovaita kuti vafuga mhute zviri nyore. Muchidimbu, haudi kuzviwana iwe uri muzuva rakapusa remhepo, zuva uye chando pasina mask yakanaka.
Ngatiendererei kune inotevera pfungwa: kuzvidzora. Ichi chikamu chinoita sezviri pachena, asi ndicho chimwe chezvakakosha, sezvo kuramba uchipfeka mask hakugone kungoita dambudziko rakazara, asi zvakare kutiita kuti tive netsaona nekuda kwekukanganisa kwakanyanya mumunda wedu wekuona. Tinofanira kuva nechokwadi chokuti dzinoenderana nengowani yedu. Muchokwadi, kana iyo elastic band ine silicone strips (iyo inonamatira kuwedzera kugadzirisa), zviri nani. Zvakakoshawo kutarisa kushorwa kweizvi, kuitira kuti zvitigarise uye zvisingaputsi nyore nyore.
Pakuigadzirisa kune helmete, tichava nechokwadi chezvinhu zviviri: kuti hapana nzvimbo pakati pepamusoro nengowani, uye kuti chikamu chepasi hachitsikiriri mhino. Kune iyo yekupedzisira inokurudzirwa zvikuru kutarisa hukuru hwechimiro. Parizvino pane marudzi matatu eizvi: madiki, evana; svikiro, generic kuvanhu vakuru; iyo hombe, patinenge tichida / tichida kuvhara zvimwe zvechiso.
Iye zvino, tiri kuenda kune chikamu chikuru chemasikisi uye iyo inowanzopa misoro yakawanda mukusarudza kwayo kune zvose zvakasiyana-siyana zvinowanikwa: lenses. Polarized, photochromic, blizzard, malenzi anochinjika… uye dai zvisina kukwana, kune malenzi ane mavara akasiyana! Usanetseke, usavhunduka, nekuti mune zvinyorwa zviri pane ino blog iwe unowana ruzivo rwese rwaunoda kuti uite sarudzo yakanaka.
KUDZIVIRIRWA KWEUV RADIATION
Chinhu chekutanga chekufunga ndechekuti ma lenzi ane emhando uye, saka, chengetedza (pakati pezvimwe zvinhu) kubva kune UV mwaranzi kudzivirira chero kukuvara kungangoita sekupofumadza kwechando. Uhwu rudzi rwehupofu hunogona kuitika nekuonekwa kuri nyore, asi kunewo matambudziko anokonzerwa nekutsva kwecornea kana retina. Hazvifanirwe kukanganwa kuti chando chine simba 80% kupfuura fungidziro yemwaranzi.
FOG UYE ANTI-FOG SYSTEM
Nhamba yechipiri ndeyekuvhuvhuta. Iyo yakanaka anti-condensation system ichatipa hupenyu, ichibvisa basa rinonetesa rekuramba kuchenesa lenzi. Mukuwedzera kune chimwe chinhu chiri pachena: tinofanira kukwanisa kuona zororo uye zvipingamupinyi zvinogona kuitika munzira yedu kudzivisa njodzi.
MURAKA UYE RUDZI RWE LENS
Kuenderera mberi neizvi zvivakwa zvekufunga nezvazvo pakusarudza mask, tasvika padanho ratakanyanya kunakidzwa nazvo: ma lenzi, ruvara rwavo uye mhando. Sezvatareva kune marudzi akawanda emalenzi, uye munyaya iyi tichaisa pfungwa pakutsanangura kuti ndezvipi zvinoshandurana, asi iwe une ruzivo pamusoro pezvimwe mune zvimwe zvinyorwa pa blog. Sezvaungangoziva iwe, zvichienderana nemamiriro ekunze uye kusimba kwechiedza, isu tinofanirwa kushandisa lenzi ine rakasiyana VLT (Inooneka Chiedza Chekufambisa) mwero wekudzivirira. Kureva kuti, CAT 1 lenses inoshandiswa mazuva ane makore (ichave yakanyanya kujeka) uye yakaderera kuoneka, nepo CAT 3 ye kwakachena mazuva ezuva. Hunhu hwemalenzi anochinjika ndeyekuti unotisunungura kubva pakudiwa kwekuve nefuremu yakasiyana yezuva rega rega sezvo, nekuda kwemagnetic system yedu, unogona kushandura lenzi yako mumasekonzi mashoma. Sezvatinoziva, mumakomo mamiriro ekunze akaoma kufanotaura, saka nemagirazi aya iwe uchachengetedza nzvimbo uye kunyaradza. Iwe unozongo chengeta imwe lenzi muhomwe yako padivi pe ski pass yako kana zvichidikanwa.
MAMASIKI ANE ANOCHINJIKA MALENZI KUBVA KUULLER
Munofunga kuti pane zvinhu zvakawanda zvokufunga nezvazvo here? Usanetseke, nekuti tiripo kuti tirambe tichiita kuti zvive nyore kwauri. Ese hunhu hwatakaongorora mukati mechinyorwa chauchawana mune yedu ski masks. Heinoi a pfupiso yehunhu hwemaski aUller:
Ski goggles nekureruka kwakanyanya uye kunyaradza.
X-POLAR tekinoroji ine UV-400 dziviriro uye Dual Layer AntiFog yakapetwa kaviri sisitimu yekudzivirira fogging.
Mazhinji emamodeli edu anowira pasi pechikamu chegirazi dzakakwenenzverwa, nekuda kwekuparadzaniswa kwema lenzi avo.
Pachine zvimwe zvinhu zvakawanda zvekuziva nezve ski masks, uye isu tichakuudza nezvazvo mune zvinotevera zvinyorwa. Isu tichataura nezve huremu, iyo curvature yemakristasi ... saka pano tinokumirira iwe!
NDEZVIPI ZVINOCHINJIKA MAGNETIC LENSES?
Malenzi emhando mbiri dzakasiyana dzeVLT dziviriro (inooneka mwenje mwero) iyo iwe yaunogona kuchinja kubva kune imwe kuenda kune imwe mumasekonzi mashoma nekuda kweiyo magineti system.
NDEZVIPI ZVINHU EMALENZI ANOGARA KUSHANDISWA?
Inonyanya kupihwa ndeye CAT 1 mhando yemazuva mashoma ane makore uye CAT 3 yemazuva ezuva.
NEI NDICHIFIKA KUPEKA SKI MASK?
Izvo zvakakosha nekuda kwezvikonzero zvekudzivirira, zvese zvinoonekwa nekuda kweiyo UV mwaranzi, pamwe nezvinokonzeresa mazaya echando, tumbuyu kana zvimwe zvinhu zvekuyamura patinenge tichitsvedza. Pakupedzisira, kuti zvionekwe zviri nani uye kuona chero chipingamupinyi chiri munzira, pamwe nekudzivirira kubva kunotonhora nemhepo mamiriro ekunze.
CHII CHINONYANYA CHEMASK?
Tinofanira kuva nechokwadi chokuti hapana nzvimbo pakati pengowani nechepamusoro pemagirazi uye kuti chikamu chezasi chegirazi hachimanikidzi mhino dzedu, inofanirawo kuva pamusoro pematama. Izvi zvinowanzogadziriswa nekusimbisa tambo zvakanyanya kana zvishoma.
GOGGLES KANA MAMASIKI EKU SKIING?
Goggles anonyanya kukurudzirwa kune mamwe marudzi emitambo senge motocross, bhasikoro kana kumhanya, nepo yemitambo yechando, masks isarudzo iri nani.